Maxay yihiin Gantaallada S-400 ee Mareykanku diidan yahay in Turkigu soo iibsado | Xaysimo
Home War Maxay yihiin Gantaallada S-400 ee Mareykanku diidan yahay in Turkigu soo iibsado
Maxay yihiin Gantaallada S-400 ee Mareykanku diidan yahay in Turkigu soo iibsado
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wareysi uu siiyay telefishinka CBS ee laga leeyahay Mareykanka ku sheegay in dowladdiisa ay qorsheyneyso inay Ruushka ka soo iibsato qayb labaad oo ah gantaallada S-400.
Hase yeeshee Durbadiiba Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa yiri: “Waxaan uga digeynaa Turkiga inuu qalab dheeraad ah oo militari ka soo gato Ruushka.”
Xukuumadda Ankara ayaa u muuqata in ay dhagaha ka fureysaneyso digniinta Washington, sidii ay marar kaleba horay u sameysay.
Isagoo Axaddii ka qayb galayay barnaamijka “Face the Nation” ee ka baxa warbaahinta CBS ayay wariyaha daadihineysay barnaamijka, oo lagu magacaabo Margaret Brennan, weydiisay su’aashan.
“Waxay u muuqataa in in aad wali qorsheyneysaan sidii aad qayb kale oo gantaallada S-400 kusoo iibsan lahaydeen, soo sidaas ma aha?
Erdoan oo ka jawaabayay su’aasha ayaa yiri: “Waqti dhow ayaan soo iibsaneynaa, ma jirto cid faro gashan karta arrimo uu leeyahay wadan kale, lagamana hadli karo tirada qalabka difaaca ee aan iibsaneyno iyo qaaka aan u iibsaneyno toona. Annaga ayaa arrimahaas go’aankooda iska leh.”
Wariyaha ayaa ku celisay hadalka oo tiri, “ma waxaad ula jeeddaa haa”. Erdogan oo islamarkiiba jawaab celinayayna wuxuu yiri: “Maxaad ka waddaa? Dabcan waa haa.”
Sida ay sheegtay Wakaaladda Wararka ee Reuters, afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa durbadiiba wax laga weydiiyay sida ay dowladdiisa u aragto hadalka Recep Tayyip Erdogan.
“Waxaan uga digeynaa Turkiga, si walba ayaan digniin ugu direynaa, heer walbana waan gaarsiineynaa, waxaana u seegeynaa in uusan sii heysanin gantaallada S-400 iyo in uusan qalab militeri oo dheeraad ah ka iibsanin Ruushka,” ayuu yiri Sfhayeenka.
‘Waxaa ka dhalanaya cunaqabateyn’
“Waan sii wadi doonnaa inaan si loo wada jeedo oo faahfaahsan ugu sheegno Turkiga in hub walba oo cusub oo uu kasoo iibsado Ruushka uu keeni karo in la saaro cunaqabateyn dheeraad ah, taasoo ka baxsan cunaqabateyntii lagu soo rogay bishii December ee sanadkii 2020-kii,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Qoraalka sawirka,Gantaalla S-400 waxay ka mid yihiin kuwa ugu halista badan ee loo adeegsado weerarrada dhinaca cirka
Afhayeenka wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka waxa uu sidoo kale sheegay in Washington ay Turkiga u aragto wdadan xulafo iyo saaxiib la ah, ayna hadda raadinayaan qaabkii ay ku sii xoojin lahaayeen xiriirka bah-wadaagnimo ee ay la leeyihiin Turkiga “inkastoo ay jiraan arrimo ay ku kala aragti duwan yihiin”.
Bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay ayay waaxda dhaqaalaha ee Mareykanka cunaqabateyn dul dhigtay Turkiga kaddib markii ay Ankara dalkeeda geysatay gantaallada difaaca hawada ee S-400 oo ay kasoo iibsadeen Ruushka.
Bishii April ee sanadkna 2021-ka ayay dhaqan gashay cunaqabateyntaas oo lagu magacaabo “CAATSA”, waxaana sidaas Turkiga looga mamnuucay hub uu kasoo iibsan lahaa Mareykanka.
Aqalka Wakiillada Mareykanka ee Congress-ka ayaa cunaqabateynta CAATSA ansixiyay sanadkii 2017-kii. Hindise sharciyeedkaas waxa uu sidoo kale waddada u xaaray in cunaqabateynno lagu soo rogo dalalka kala ah Ruushka, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi.
Labada waddan ayaa ka wada tirsan gaashaan buurta NATO, walow ay waxyaabo badan oo dhanka militariga khuseeya ay isku maan dhaafaan.
Turkiga ayaa hadda wada wadahadallo uu Ruushka uga iibsanayo gantaalladaas, waxayna u muuqataa in Ankara aysan wax tixgelin ah siin doonin carada uu Mareykanku ka muujinayo tallaabadan.
Erdogan ayaa marka uu wareysiga CBS bixinayay sheegay in uu farriin u dirayo madaxweyne Joe Biden.
“Waxaan u sheegayaa Biden, arrintan waa lagama maarmaan. Horay waxaan uga iibsannay diyaaradaha noocoodu yahay F35. Waxaan bixinnay lacag dhan 1 bilyan iyo 400 oo milyan oo doolar balse Mareykanku nama uusan siinin diyaaradihii aan ka bixinnay 1 bilyan iyo 400 oo milyan oo doolar, maxaa diyaaradahaas naloo siin waayay, annagoo lacagtooda bixinnay?”.
Maalinta Arbacada ah ayaa la filayaa in madaxweyne Erdogan uu la kulmo dhigiisa dalka Ruushka, Vladimir Putin, arrimaha kale ee ay ka wada hadli doonaan labada hoggaamiyena waxaa ka mid noqon doona xaaladaha kasoo kordhay waqooyiga-galbeed ee dalka Suuriya.
Sidey u shaqeeyaan gantaallada S-400?
Qaybtii ugu horreysay ee gantaallada S-400 waxa uu turkiga helay bartamihii sanadkii 2019-kii.